Magaalaa Adaamaatti rakkoo nageenyaa mudateen namootni ajjeefaman 16 qaqqabuu maddeen hospitaalaa himan - BBC News Afaan Oromoo
Magaalaa Adaamaatti rakkoo nageenyaa mudateen namootni ajjeefaman 16 qaqqabuu maddeen hospitaalaa himan
Hiriira mormii guyyoota sadan darban turee gara okkaraatti jijjiirameen Adaamaatti yoo xiqqaate namoonni 16 ajjeefamuu maddeen hospitaalarraa argaman mullisaniiru.
Hospitaala Adaamaatti Ogeessa Wallaansa Baqaqsanii Yaaluu kan ta'an Dr. Dassaaneny Fiqaaduu lakkoosi namoota miidhamanii gara hospitaala dhufan akka kaleessaafi dheengaddaa baayyachuu baatus ammallee dhufaa jiru jedhan.
Har'a waaree booda namoonni miidhamanii gara hospitaalaa dhufan akka jiran himuun, namoonni miidhaan irra ga'e baayyachuu isaatiin wallaansa qaqqabsiisuun hedduu ulfaataa akka ture ibsaniiru.
Miidhaan Kamisa kaleessaa qaqqabe baayyee cimaa kan tureefi rasaasaan, waraansaafi uleedhaan rukkutamuun akka ture dubbatu Ogeesssichi.
AKka Dr. Dassaaleny jedhanitti, kaleessa qofa namoonni miidhaa cimaafi salphaadhaaf gara hospitaalaa dhufan 100 ol ta'u.
Namoota 16 ja'an Adaamaatti ajjeefaman keessaa 12 kaleessa, sadii Roobii, tokko ammoo har'a ta'uus himaniiru.
Itti-gaafatamaan Bulchiinsaafi Nagenyaa magaalaa Adaamaa Ubaad Junaa Kaleessa waaree boodarraa kaasee walitti bu'insi uumame tasgabbaa'aa jiraachuu himuun, kun ammoo fedhiin shira xaxxootaa keessaumaayyu tokkummaa amma dhufe kana balleessuudhaf yaaliin taasifame jira jedhu.
Tumsa Qeerroofi Qarree akkasumas maanguddoonni keenya taasisaniin kan yaadanii ture milkaa'ina waan hin argannee ulaa barbaadanii akka nageenyi boora'u godhamaa jira.
Qondaalli kun lakkoofsa nama ajjeefamee sirriitti qulqulleeffannee ifa goona jechuun, namoota ajjeefaman kana keessa dubartiin tokko rasaasa mana keessaa bakka hin beekamnee dhuka'uun bakka afur rukkutamtee akka lubbuun darbe kaasaniiru.
Walitti bu'insi kun kaayyoo warra badiidha malee walitti bu'insa sabaafi saba gidduu ykn amantaa gidduu akka hin taane ummata waliin mariyachaa jiraachuu himuun, qaamni miidhaa uumame qulqulleessaa jirus jira jedhan.
Akka Itti-gaafatamaan Bulchiinsaafi nageenyaa kun jedhanitti, qaamni hidhatee seenee namarratti dhukaasu akka jiru odeeffannoon jira.
Mana keessa dhokatee taa'ee dhukaasuun kan nama ajjeesanis turan jedhan.
Ajjeechaa magaalaa Adaamaatti qaqqabe kana keessatti humnoota nageenyaatiin kan fudhatame tokkollee akka hin jirre ibsuun, malawwan adda addaa karaa seeraafi naga qabeessa ta'een hiriira bitimsuun danda'amu ni jira jedha.
Wanti uumame rakkoo sabaas kan amantaas miti; amantaan durumayyu waliin jiraata jechuun: "Taphni siyaasaa keessa jiraachuusaati. Hiriirri nagaa eessumattuu ni bahama, yoomiyyu ni bahama, Adaamaa keessatti bahameera.
Kun warroonni carraan isaaniif milkaa'uu dhabe carraa kanatti fayyadamee, keessumaayyu tokkummaafi tasgabbiin naannoo keenyatti uumame akka hin milkoofneef duubatti deebisuudhaa kan ta'edha.
wanti dheengadda Adaamaatti qaqqabe kanaan dura kan ta'ee hin beekne ta'uu kaasanii, "Kan nu barsiiseefi akka qophoofnee irratti hojjennuuf hojii manaa guddaa nuuf kenne," jedhan Obbo Ubaad.
'Aggaammii' Obbo Jawaar Mohaammad irratti gaggeefameen walqabatee hiriira mormii Roobii darbe jalqabee hanga kaleessaatti magaalota Oromiyaa hedduu keessatti gaggeeffameen lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbee dabalaa jiraachuu maddeen magaalotaafi hospitaalarraa argaman ni mul'isu.
Hidhattoonni Taalibaan daangaa babal’ifachaa jiraachuu hordofuun labsiin sa’aatii daangessuu labsame
Yeroo dhuma kan haaromfame: 21 Onkololeessa 2020